MuUS unogona kutenga yakadzoreredzwa 16 "MacBook Pro | Ndinobva mac
Mwedzi mitatu mushure meiyo 16-inch MacBook Pro yakaburitswa uye kwete pasina kumwe kunetseka munzira, Apple yatove kuisa iyi modhi pakutengesa pasi pemamiriro ekugadziriswa.
Tsitsi dzeiyi nhau, zvirinani kuSpain, ndizvozvo Ichi chinopihwa chinogona kutengwa chete kuburikidza nechitoro chepamhepo uye muUnited States. Isu tinofungidzira kuti hazvizotora nguva yakareba kuti tione iyi mhando yechigadzirwa muzvitoro muSpain.
Yakagadziriswazve 16-inch MacBook Pro 15% yabviswa
Yakagadziridzwa Apple zvigadzirwa ndeaya ayo, atambura imwe mhando yehardware kana software dambudziko, vakagadziriswa uye vakaiswa kutengesa zvakare.
Iyo ine vimbiso yekambani yeAmerica uye nekuziva kuti kana paine chero chinhu chakatsiviwa, zvaitwa nezvakatanga zvinhu. Izvo zvakare sekunge zvaive zvitsva kubva kufekitori.
Iwo mukana wakanaka kwazvo wekutenga zvimwe zvigadzirwa kuchengetedza mari pamusoro pemutengo weimwe nyowani. Zve 16 "MacBook Pro, kuchengetedza kunosvika 15%. Saka iwe unogona kuwana komputa kubva $ 2.209 kusvika $ 3.819. Pini yakanaka, hapana mubvunzo.
Apple inobata izvi zvakagadziridzwa MacBook Pros semamodeli matsva uye kunyange vangangove vatengi vanogona wedzera AppleCare + uye nekudaro wedzera vimbiso. Nekuti a gore rimwe garandi yakajairwa uyezve rimwe gore rekuwedzeredzwa kuburikidza neiyi modality.
Saka unoziva, kana vatotanga muUS, Tinovimba inosvika kune dzimwe nyika zvakare. Kana iwe uchida kuve uine mumaoko ako iyo nyowani modhi yeMacBook Pro, ine ayo matsva maspika, kiibhodhi uye yakakura skrini, iyo yakagadziridzwa isarudzo yakanaka.
Isu tichava tichiziva nezvekuti kushambadzira kwayo kunotanga kuburikidza nechitoro chepamhepo muSpain uye isu tichakuudza nezvazvo. Parizvino unogona kutanga kusevha uye kana watotanga, usatonge kunze iyi sarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Pro » MuUS unogona kutenga yakadzoreredzwa 16 ”MacBook Pro
Lockdown inowanikwa kuti Mac yako ive yakachengeteka